M1ပွိုငျပှဲအနိုငျရပွီး ပထမဆုံး MLBB ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈလာတဲ့ Evos Legends – Gaming Noodle
ကှာလာလမျပူ ၊ ၁၉ နိုဝငျဘာ ၂၀၁၉ – Shanghai Moonton Technology က အှနျလိုငျးအားကစားပွိုငျပှဲတဈခု ဖွဈတဲ့ Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံပှဲကို ပထမဆုံးအကွိမျ အိမျရှငျအဖွဈကငျြးပခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
M1 ပှဲ အဖွဈ လူအသိမြားတဲ့ အဆိုပါ ပွိုငျပှဲမှာ ဆုကွေးအဖွဈ ဒျေါလာ ၂၅၀,၀၀၀ ခြီးမွငျ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) မှ အသငျး (၈)သငျး နှငျ့ M1 qualifiers အသငျး(၈)သငျးတို့ကို ဖိတျချေါပွီး top 16 MLBB ကစားသမားအဖွဈ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ နိုဝငျဘာ (၁၁)မှ (၁၄)ရကျနတှေ့ငျ ထို အသငျး (၁၆) သငျးသညျ Group Stage တှငျ အခငျြးခငျြး ယှဉျပွိုငျကစားပွီးနောကျ အနိုငျရရှိသညျ့ အသငျး (၈)သငျးကို ၂၀၁၉ နိုဝငျဘာ (၁၅)ရကျ မှ (၁၇)ရကျနတှေ့ငျ မလေးရှားနိုငျငံ ကှာလာလမျပူမွို့ ရှိ Axiata Arena မှာ Grand Stage ကို ယှဉျပွိုငျကစားကွရပါတယျ။
Group Stage ယှဉျပွိုငျမှုမှာ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ အသငျး(၈)သငျးမြားမှာ Rex Regum Qeon (RRQ) (Indonesia), EVOS Legends (Indonesia), VEC Fantasy Main (Vietnam), Burmese Ghouls (Myanmar), Axis Esports (Malaysia), Todak (Malaysia), Sunsparks (Philippines) and 10second Gaming + (Japan) တို့ ဖွဈပါတယျ။
EVOS Legends သညျ ၄ မှတျ RRQ အသငျးသညျ ၃ မှတျဖွငျ့ MLBB ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံတှငျ EVOS Legends က ပထမဆုံးအကွိမျ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး ဆုကွေးငှေ ဒျေါလာ ၈၀ ၀၀၀ ကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
“ ကြှနျတျောတို့ ရညျရှယျခကျြသညျ MLBB နဲ့ E-sports ဝါသနာပါသူမြားကို M1 မှတဆငျ့ အိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျ ဖျောပေးခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ သူတို့ အိမျမကျအတှကျ ကွိုးစားအားထုတျကွပွီး ထူးခြှနျတဲ့ ကစားသမားမြားကိုလညျး မကျြမွငျတှရှေိ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ ကိုယျခဈြမွတျနိုးတဲ့ အရာကို တနျဖိုးထားတတျဖို့ နဲ့ ဖွဈခငျြတဲ့ အိမျမကျတှကေို နားလညျသိရှိဖို့အတှကျ ကြှနျတျောက တှနျးအားပေးခငျြတာပါ။ E-sport တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျလညျး M1 မှတဆငျ့ ကြှနျတျောတို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးခငျြတာဖွဈပါတယျ” လို့ Justin Yuan, CEO of Shanghai Moonton Technology မှ ပွောခဲ့ပါတယျ။
Malaysia’s Minister of Youth and Sports, YB Tuan Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman
M1တှငျ MLBB ပွိုငျပှဲမြားသာ ကငျြးပနခွေငျး မဟုတျဘဲ တခွား အစီအစဉျမြားလညျး ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ Malaysia’s Minister of Youth and Sports ဖွဈတဲ့ YB Tuan Syed Saddiq က Grand Final day မှာ M1ကို တကျရောကျအားပေးခဲ့ပါတယျ။ နာမညျကြျော မလေးရှားအဆိုတျောအဖှဲ့ K-Clique လညျး ဒုတိယနမှေ့ာ ဖြျောဖွပေေးခဲ့ပွီး Grand Final day မှာ Cosplayers မြားကလညျး cosplay မြား ပွသခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒျေါလာ ၁၄၄၀၀၀ ကြျော တနျဖိုးရှိတဲ့ item ၁၈၀၀၀ကို (၃)ရကျလုံးပှဲတကျရောကျခဲ့သူမြားကို ကံစမျးမဲဖောကျပေးခဲ့ပါတယျ။
M1ကို Shanghai Moonton Technology Co., Ltd က စီစဉျကငျြးပခဲ့ပွီး စပှနျဆာအဖွဈ U Mobile live stream partner အဖွဈ YouTube Gaming. M1 ပှဲစဉျအားလုံးကို https://www.facebook.com/mobilelegendsgame/ မှာ အသေးစိတျကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံပှဲမှာ MLBB က ပါဝငျ ကငျြးပခဲ့ပွီဖွဈသျောလညျး ကရြောကျလာတော့မယျ့ 2019 SEA Games ပှဲမှာပါ ပထမဆုံး E-sport medal events အဖွဈ ပါဝငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ (၃၀)ကွိမျမွောကျ SEA Games ကို ဖီလဈပိုငျနိုငျငံမှာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပွီး နိုဝငျဘာလ (၃၀) မှ ဒီဇငျဘာလ (၁၁)ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။ E-sports medal events ကတော့ ဒီဇငျဘာလ (၅)ရကျနမှေ့ (၁၀)ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။ MLBB သညျ Esports လောကတှငျ ပထမဆုံး SEA Games မှာ ပါဝငျကစားခွငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။
Shanghai MOONTON Technology Co. Ltd အကွောငျး
MOONTON ကုမ်ပဏီကို ၂၀၁၄ ခုနှဈ တရုတျနိုငျငံ ရှနျဟိုငျးမွို့တှငျ စတငျတညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ MOONTON မှာ ဝနျထမျး (၃၀၀)ကြျောဖွငျ့ China၊ Turkey၊ Russia၊ the United States၊ Kazakhstan၊ Myanmar၊ Malaysia၊ Indonesia နှငျ့ Singapore မှာ လုပျကိုငျလကျြရှိပါတယျ။ MOONTON က မိုဘိုငျးဂိမျးဈေးကှကျကို အဓိက ဦးတညျပွီး ဂိမျးအမြိုးမြိုးကို တီထှငျလကျြရှိပါတယျ။ MOONTON သညျ တရုတျနိုငျငံတှငျ နာမညျကြျောကွားတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပွီး နိုငျငံခွားဂိမျးကစားသမား အမြားအပွားရရှိထားတဲ့ နံပါတျ(၁)ကုမ်ပဏီပဲ ဖွဈပါတယျ။ Mobile Legends: Bang Bang က အခုခြိနျတှငျ နာမညျကြျောကွားတဲ့ ဂိမျးတဈခု ဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့တဝှမျးရှိ မိုဘိုငျးဂိမျးလောကတှငျ ဦးဆောငျလကျြရှိပါတယျ။
Mobile Legends: Bang Bang အကွောငျး
Mobile Legends: Bang Bang သညျ ကမ်ဘာ့တဝှမျးရှိ မိုဘိုငျးဂိမျးလောကတှငျ နာမညျအကြျောကွားဆုံး မိုဘိုငျးဂိမျး ဖွဈပါတယျ။ ထို ဂိမျးကို install လုပျသူ သနျး (၅၀၀)ကြျော ရှိပွီး လစဉျ အသုံးပွုသူ ဦးရေ သနျး(၇၅)ကြျောရှိပွီ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံ (၈၀)ကြျောမှ top 10 rank ကို ရောကျရှိပွီးပွီ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့တဝှမျးရှိ မိုဘိုငျးဂိမျးလောကတှငျ အမြားဆုံးမိုဘိုငျးဂိမျးကစားတဲ့ နိုငျငံမြားမှာ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံ၊ အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေ နှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံတို့ ဖွဈပါတယျ။ Mobile Legends: Bang Bang သညျ (၁၃၉) နိုငျငံအထိ ရောကျရှိနပွေီ ဖွဈပွီး ဘာသာစကားပေါငျး (၂၅) မြိုး နှငျ့ (၁၂၀၀) servers ဖွငျ့ ထို ဂိမျးကို အဆငျပွေ ခြောမှစှေ့ာ ကစားနိုငျရနျ လုပျဆောငျပေးထားပါတယျ။
#GamingNoodle #Moonton #MLBB #M1
M1ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရပြီး ပထမဆုံး MLBB ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်လာတဲ့ Evos Legends
ကွာလာလမ်ပူ ၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ – Shanghai Moonton Technology က အွန်လိုင်းအားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
M1 ပွဲ အဖြစ် လူအသိများတဲ့ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုကြေးအဖြစ် ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ချီးမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) မှ အသင်း (၈)သင်း နှင့် M1 qualifiers အသင်း(၈)သင်းတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး top 16 MLBB ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ (၁၁)မှ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ထို အသင်း (၁၆) သင်းသည် Group Stage တွင် အချင်းချင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားပြီးနောက် အနိုင်ရရှိသည့် အသင်း (၈)သင်းကို ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ (၁၅)ရက် မှ (၁၇)ရက်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ရှိ Axiata Arena မှာ Grand Stage ကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရပါတယ်။
Group Stage ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အသင်း(၈)သင်းများမှာ Rex Regum Qeon (RRQ) (Indonesia), EVOS Legends (Indonesia), VEC Fantasy Main (Vietnam), Burmese Ghouls (Myanmar), Axis Esports (Malaysia), Todak (Malaysia), Sunsparks (Philippines) and 10second Gaming + (Japan) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
EVOS Legends သည် ၄ မှတ် RRQ အသင်းသည် ၃ မှတ်ဖြင့် MLBB ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံတွင် EVOS Legends က ပထမဆုံးအကြိမ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၈၀ ၀၀၀ ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်သည် MLBB နဲ့ E-sports ဝါသနာပါသူများကို M1 မှတဆင့် အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သူတို့ အိမ်မက်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ကြပြီး ထူးချွန်တဲ့ ကစားသမားများကိုလည်း မျက်မြင်တွေ့ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အရာကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ နဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အိမ်မက်တွေကို နားလည်သိရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်က တွန်းအားပေးချင်တာပါ။ E-sport တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်း M1 မှတဆင့် ကျွန်တော်တို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်” လို့ Justin Yuan, CEO of Shanghai Moonton Technology မှ ပြောခဲ့ပါတယ်။
M1တွင် MLBB ပြိုင်ပွဲများသာ ကျင်းပနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ တခြား အစီအစဉ်များလည်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ Malaysia’s Minister of Youth and Sports ဖြစ်တဲ့ YB Tuan Syed Saddiq က Grand Final day မှာ M1ကို တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော် မလေးရှားအဆိုတော်အဖွဲ့ K-Clique လည်း ဒုတိယနေ့မှာ ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပြီး Grand Final day မှာ Cosplayers များကလည်း cosplay များ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်လာ ၁၄၄၀၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ item ၁၈၀၀၀ကို (၃)ရက်လုံးပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူများကို ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
M1ကို Shanghai Moonton Technology Co., Ltd က စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး စပွန်ဆာအဖြစ် U Mobile live stream partner အဖြစ် YouTube Gaming. M1 ပွဲစဉ်အားလုံးကို https://www.facebook.com/mobilelegendsgame/ မှာ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပွဲမှာ MLBB က ပါဝင် ကျင်းပခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ကျရောက်လာတော့မယ့် 2019 SEA Games ပွဲမှာပါ ပထမဆုံး E-sport medal events အဖြစ် ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃၀)ကြိမ်မြောက် SEA Games ကို ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ (၃၀) မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ E-sports medal events ကတော့ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့မှ (၁၀)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MLBB သည် Esports လောကတွင် ပထမဆုံး SEA Games မှာ ပါဝင်ကစားခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Shanghai MOONTON Technology Co. Ltd အကြောင်း
MOONTON ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ MOONTON မှာ ဝန်ထမ်း (၃၀၀)ကျော်ဖြင့် China၊ Turkey၊ Russia၊ the United States၊ Kazakhstan၊ Myanmar၊ Malaysia၊ Indonesia နှင့် Singapore မှာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ MOONTON က မိုဘိုင်းဂိမ်းဈေးကွက်ကို အဓိက ဦးတည်ပြီး ဂိမ်းအမျိုးမျိုးကို တီထွင်လျက်ရှိပါတယ်။ MOONTON သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားဂိမ်းကစားသမား အများအပြားရရှိထားတဲ့ နံပါတ်(၁)ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Legends: Bang Bang က အခုချိန်တွင် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တဝှမ်းရှိ မိုဘိုင်းဂိမ်းလောကတွင် ဦးဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
Mobile Legends: Bang Bang အကြောင်း
Mobile Legends: Bang Bang သည် ကမ္ဘာ့တဝှမ်းရှိ မိုဘိုင်းဂိမ်းလောကတွင် နာမည်အကျော်ကြားဆုံး မိုဘိုင်းဂိမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ဂိမ်းကို install လုပ်သူ သန်း (၅၀၀)ကျော် ရှိပြီး လစဉ် အသုံးပြုသူ ဦးရေ သန်း(၇၅)ကျော်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ (၈၀)ကျော်မှ top 10 rank ကို ရောက်ရှိပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တဝှမ်းရှိ မိုဘိုင်းဂိမ်းလောကတွင် အများဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းကစားတဲ့ နိုင်ငံများမှာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Legends: Bang Bang သည် (၁၃၉) နိုင်ငံအထိ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး ဘာသာစကားပေါင်း (၂၅) မျိုး နှင့် (၁၂၀၀) servers ဖြင့် ထို ဂိမ်းကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ကစားနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။